စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အိုင်တီအဖွဲ့များသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးတာဝန်များကို အဘယ်ကြောင့်မျှဝေသင့်သနည်း။ Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အိုင်တီအဖွဲ့များသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးတာဝန်များကို အဘယ်ကြောင့် မျှဝေသင့်သနည်း။
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 21, 2022 သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 21, 2022 Alexander García-Tobar
ကပ်ရောဂါသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဌာနတိုင်းအတွက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်လာသည်။ အဲဒါက အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နေ့စဥ်အလုပ်များတွင် နည်းပညာကို ပိုမိုအသုံးပြုလေ၊ ဖောက်ဖျက်မှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုထိခိုက်နိုင်လေဖြစ်သည်။ သို့သော် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး အလေ့အကျင့်များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်သော မားကတ်တင်းအဖွဲ့များနှင့် စတင်သင့်သည်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေသည် (IT) ခေါင်းဆောင်များ၊ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်များ (CISO) နှင့် နည်းပညာအရာရှိချုပ်များ (CTO) သို့မဟုတ် ပြန်ကြားရေးအရာရှိချုပ် (CIO) ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု ကြီးထွားလာမှုသည် လိုအပ်ချက်အရ — ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မြင့်မားလာခဲ့သည်။ IT နှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။. နောက်ဆုံးမှာတော့, C-suite အမှုဆောင်များနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့များသည် ဆိုက်ဘာအန္တရာယ်ကို 'အိုင်တီပြဿနာ' အဖြစ် မမြင်တော့ပါ။ အဆင့်တိုင်းတွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် အောင်မြင်သော ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှုကို အပြည့်အဝတိုက်ဖျက်ရန် ကုမ္ပဏီများသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို ၎င်းတို့၏ အလုံးစုံအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာတွင် ပေါင်းစည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
အပြည့်အဝကာကွယ်မှုရရန်၊ ကုမ္ပဏီများသည် လုံခြုံရေး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများကြားတွင် မျှတမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဖွဲ့အစည်းများသည် ဤရှုပ်ထွေးသော ချိန်ခွင်လျှာကို မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်နည်း။ ၎င်းတို့၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့များအား ပိုမိုတက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် အားပေးခြင်းဖြင့်။
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို အဘယ်ကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်သနည်း။
နာမည်ကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် နှစ် 20 ကြာပြီး ၎င်းကိုပျက်စီးရန် ငါးမိနစ်ကြာသည်။
Warren Buffet ဖြင့်
ထို့ကြောင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအောင်မြင်စွာ အယောင်ဆောင်ရန်၊ ၎င်း၏ဖောက်သည်များကို လှည့်ဖြားခြင်း၊ ဒေတာခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်မှာ ၎င်းတို့လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များက ရယူသည့်အခါ ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ကုမ္ပဏီအတွက် ကြီးလေးသော ပြဿနာတစ်ခု။
စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လုပ်ငန်းများ၏ 100% နီးပါးသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များထံ လစဉ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များ ပေးပို့ကြသည်။ သုံးစွဲသည့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဒေါ်လာတိုင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ROI) မှ ၃၆ ဒေါ်လာခန့် ရရှိသည်။. တစ်ဦး၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုထိခိုက်စေသည့် ဖြားယောင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်၏အောင်မြင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လိမ်လည်သူများနှင့် မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များသည် အခြားတစ်ယောက်လိုဟန်ဆောင်ရန် လွယ်ကူလွန်းလှသည်။ ဤလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းကို ကာကွယ်သည့်နည်းပညာသည် ရင့်ကျက်ပြီး ရနိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ရှင်းလင်းသောလုပ်ငန်းကို ပြသရန် ခက်ခဲသောကြောင့် မွေးစားခြင်းမှာ နည်းပါးနေပါသည်။ ရွယ် အဖွဲ့အစည်းအနှံ့ လုံခြုံရေးအစီအမံများအတွက်။ BIMI နှင့် DMARC ကဲ့သို့သော စံနှုန်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ပိုမိုပေါ်လွင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အိုင်တီတို့သည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပူးတွဲဇာတ်လမ်းကို ပုံဖော်နိုင်သည်။ Silos ကို ဖြိုခွဲပြီး ဌာနဆိုင်ရာများကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်သည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက် ပိုမို ဘက်စုံချဉ်းကပ်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သည်။
DMARC သည် အဖွဲ့အစည်းများအား ဖြားယောင်းခြင်း နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အရေးကြီးကြောင်း သိရှိသော်လည်း ခေါင်းဆောင်မှုမှ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ဝယ်ယူမှုရယူရန် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ Message သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အမှတ်တံဆိပ်အညွှန်းများ (BIMI) သည် အဖွင့်နှုန်းများကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ၎င်းကို အလိုရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် DMARC နှင့် BIMI ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး voilà။ အိုင်တီသည် ထင်သာမြင်သာရှိသော ခိုင်မာသောအနိုင်ရမှုကို ရရှိသည်။ နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် ROI တွင် မြင်သာထင်သာရှိသော အဖုအထစ်တစ်ခုကို ရရှိသည်။ လူတိုင်းအနိုင်ရတယ်။
Teamwork က အဓိကပါ။
ဝန်ထမ်းအများစုသည် ၎င်းတို့၏ အိုင်တီ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အခြားဌာနများကို Silos တွင် ကြည့်ရှုကြသည်။ သို့သော် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး ရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှ ဤအတွေးအမြင်လုပ်ငန်းစဉ်သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းစေပါ။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဖောက်သည်ဒေတာကို ကာကွယ်ပေးရန်လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ ကြော်ငြာများနှင့် အီးမေးလ်ကဲ့သို့သော ချန်နယ်များနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် အချက်အလက်အများအပြားကို အသုံးပြုပြီး မျှဝေကြသည်။
လူမှုအင်ဂျင်နီယာ တိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ အားသာချက်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ တောင်းဆိုချက်အတုများ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုများပေးပို့ရန် အီးမေးလ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဖွင့်သောအခါတွင်၊ ဤအီးမေးလ်များသည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏ ကွန်ပျူတာများကို malware ဖြင့် ကူးစက်စေသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့အများအပြားသည် လျှို့ဝှက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူသုံးစွဲရန် သို့မဟုတ် ဖလှယ်ရန် လိုအပ်သည့် မတူကွဲပြားသော ပြင်ပရောင်းချသူများနှင့် ပလပ်ဖောင်းများနှင့်လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည် ROI တိုးတက်မှုကို ပိုနည်းစေခြင်းဖြင့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေမည့် ဆန်းသစ်တီထွင်သော နည်းပညာသစ်များကို အဆက်မပြတ် ရှာဖွေနေပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီတိုးတက်မှုတွေက ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ အဖွင့်အပိတ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့် အိုင်တီပညာရှင်များသည် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုများတွင် ကုမ္ပဏီအား လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ခံနိုင်ရည်မရှိစေရန်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ၎င်းတို့၏ silo မှ ထွက်ခွာရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ CMO နှင့် CISO များသည် ၎င်းတို့၏ အကောင်အထည်မဖော်မီ ဖြေရှင်းချက်များအား စစ်ဆေးသင့်သည်။ နှင့် အလားအလာရှိသော ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် အစီရင်ခံရန် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးပါ။
အိုင်တီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ဘဏ္ဍာစိုးဖြစ်လာစေရန် အခွင့်အာဏာပေးသင့်သည်-
အချက်ပေါင်းများစွာ အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း (လှစ်ထား)
စကားဝှက်မန်နေဂျာများ ကြိုက်သည်။ Dashlane or LassPass.
တစ်ခုတည်း အကောင့်ဖွင့်ခြင်း (SSO)
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းများအတွက် DMARC ၏တန်ဖိုး
Domain-based Message Authentication၊ Reporting and Conformance သည် အီးမေးလ် စစ်မှန်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်သည်။ အတည်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှသာ ၎င်းတို့၏ကိုယ်စား အီးမေးလ်များပေးပို့နိုင်သည်ဟု DMARC တွင်ကျင့်သုံးသည့်ကုမ္ပဏီများက အာမခံပါသည်။
DMARC (နှင့် အရင်းခံ ပရိုတိုကော SPF နှင့် DKIM) ကို ထိရောက်စွာ အသုံးချပြီး ကျင့်သုံးမှုသို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုကို တွေ့ရပါသည်။ ။ စစ်မှန်ကြောင်းမရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီများသည် ဖြားယောင်းခြင်းနှင့် စပမ်းအီးမေးလ်များကို ပေးပို့ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ဒိုမိန်းကို အသုံးပြု၍ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ Enforcement ရှိ DMARC သည် ကာကွယ်ထားသော ဒိုမိန်းများတွင် ဟက်ကာများကို အခမဲ့စီးနင်းခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။
SPF သို့မဟုတ် DKIM နှစ်ခုလုံးသည် အသုံးပြုသူများမြင်ရသည့် “From:” အကွက်နှင့် ပေးပို့သူကို စစ်မှန်ကြောင်း အထောက်အထားမပြပါ။ DMARC မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် မူဝါဒသည် မြင်နိုင်သော From: လိပ်စာနှင့် DKIM သော့၏ ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် SPF စိစစ်ပြီး ပေးပို့သူကြားတွင် “ချိန်ညှိမှု” (ဆိုလိုသည်မှာ ကိုက်ညီမှုတစ်ခု) ရှိနေကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များအား အတုအယောင်ဒိုမိန်းများကို အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။ မှ: လက်ခံသူများကို လှည့်စားပြီး ဟက်ကာများက မလိုလားအပ်သော သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မသက်ဆိုင်သော ဒိုမိန်းများသို့ ပြန်လည်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် ခွင့်ပြုသည့် ကွက်လပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့များသည် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားရန်သာမက အီးမေးလ်များ ပေးပို့ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ထိုအီးမေးလ်များကို ဖွင့်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုကြသည်။ DMARC စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြခြင်းသည် အဆိုပါအီးမေးလ်များသည် ရည်ရွယ်ထားသော ဝင်စာများအတွင်းသို့ ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ Brand Indicators for Message Identification (BIMI) ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ခံနိုင်ရည်အား ပိုမိုအားကောင်းလာစေပါသည်။
BIMI သည် DMARC ကို မြင်သာထင်သာရှိသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI အဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။
BIMI သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူတိုင်း အသုံးပြုသင့်သည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ BIMI သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား ၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏လိုဂိုကို အကာအကွယ်ပေးထားသောအီးမေးလ်များသို့ ပေါင်းထည့်ခွင့်ပေးသည်၊ ၎င်းသည် အဖွင့်နှုန်းကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် 10% တိုးမြင့်စေကြောင်းပြသထားသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် BIMI သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် အမှတ်တံဆိပ်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ခိုင်မာသောအီးမေးလ်အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းနည်းပညာများ — DMARC — နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အိုင်တီနှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနများအပါအဝင် မတူညီသောသက်ဆိုင်သူများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် လက်ခံသူများ၏အာရုံကိုဖမ်းစားရန် လိမ္မာပါးနပ်သော၊ စွဲမက်ဖွယ်အကြောင်းအရာလိုင်းများကို အမြဲမှီခိုအားထားနေရသော်လည်း BIMI နှင့်အတူ လိုဂိုအသုံးပြုထားသောအီးမေးလ်များသည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူလာသည်။ စားသုံးသူများသည် အီးမေးလ်ကို မဖွင့်လျှင်ပင် လိုဂိုကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တီရှပ်၊ အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် အခြား ခိုးရာပါပစ္စည်းပေါ်တွင် လိုဂိုတစ်ခု ထားသကဲ့သို့ အီးမေးလ်တစ်ခုပေါ်ရှိ လိုဂိုတစ်ခုသည် လက်ခံသူများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ချက်ချင်းရရှိစေသည် — မက်ဆေ့ချ်ကို ဦးစွာဖွင့်ခြင်းမပြုဘဲ ယခင်ကမဖြစ်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ BIMI သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား ဝင်စာပုံးထဲသို့ အမြန်ဝင်ရောက်ရန် ကူညီပေးသည်။
ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် Valimail ၏ DMARC
DMARC မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ is BIMI သို့လမ်းကြောင်း။ ဤလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းရန်အတွက် DNS သည် ပို့လိုက်သော မေးလ်အားလုံးကို မှန်ကန်စွာ စစ်မှန်ကြောင်းသေချာစေရန် လိုအပ်သည် — လုပ်ငန်းများအတွက် အချိန်ကုန်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု။ ကုမ္ပဏီများ၏ 15% ကသာ ၎င်းတို့၏ DMARC ပရောဂျက်များကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိရမယ် မဟုတ်လား။ ရှိသည်!
Valimail Authenticate အပါအဝင် DMARC ကို ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပေးသည်-
အလိုအလျောက် DNS ဖွဲ့စည်းမှု
အသိဉာဏ်ရှိသော ပေးပို့သူ သက်သေခံခြင်း။
အသုံးပြုသူများအား လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နေသော DMARC ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည့် လိုက်နာရလွယ်ကူသော အလုပ်စာရင်းတစ်ခု
DMARC စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထား™ DNS စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမှ အန္တရာယ်ကို ယူသည်။ ၎င်း၏ ပြီးပြည့်စုံသော မြင်နိုင်စွမ်းသည် ကုမ္ပဏီများကို ၎င်းတို့၏ကိုယ်စား မည်သူက အီးမေးလ်ပို့သည်ကို မြင်နိုင်စေပါသည်။ လမ်းညွှန်ထားသော၊ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအသွားအလာများသည် သုံးစွဲသူများအား နက်ရှိုင်းသော၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာ သို့မဟုတ် ပြင်ပကျွမ်းကျင်မှုစာချုပ်ချုပ်ရန်အတွက် မလိုအပ်ဘဲ ဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုစီတွင် သုံးစွဲသူများကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဆက်စပ်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်များသည် အလိုအလျောက် အကြံပြုချက်များကို တရားဝင်အောင် ကူညီပေးသည် — နှင့် သတိပေးချက်များသည် သုံးစွဲသူများကို နောက်ဆုံးပေါ် ထားရှိပေးသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနများသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုများမှ ဝေးကွာသော အမိုးအကာများတွင် မနေနိုင်တော့ပါ။ Twitter၊ LinkedIn နှင့် အခြားသော ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပလက်ဖောင်းများတွင် ပိုမိုကြီးမားသော တည်ရှိမှုကြောင့် ၎င်းတို့ကို ပိုမိုရရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဟက်ကာများက အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်သော ပစ်မှတ်များအဖြစ် မြင်ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအသိပညာပေးသည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးခြင်း၏တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုသောကြောင့်၊ IT နှင့် CISO အဖွဲ့များနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဇယားတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကို ဖိတ်ခေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Valimail ကို စမ်းကြည့်ပါ။
ထုတ်ဖော်: Martech Zone ဤဆောင်းပါးတွင် တွဲဖက်လင့်ခ်များ ထည့်သွင်းထားသည်။
Tags: BIMIအမှတ်တံဆိပ်အပိုင်စီးခြင်း။စည်ပင်CTOဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဆိုက်ဘာပြစ်မှုဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးDMARCအီးမေးလ်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်ဂုဏ်သတင်းအီးမေးလ်ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုMulti-factor authenticationphishingဂုဏ်သရေလှည့်စားမှု
အမှတ်စဉ် စွန့်ဦးတီထွင်သူနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလက်ဇန်းဒါးသည် ယခင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတွင် စီအီးအိုဖြစ်ခဲ့ကာ IPO ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသုံးခုအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရောင်းအဖွဲ့များကို လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူသည် Boston Consulting Group နှင့် Forrester Research ကဲ့သို့သော ထိပ်တန်းသုတေသနကုမ္ပဏီများတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူနှင့် အမှုဆောင်ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ValiCert၊ Sygate နှင့် SyncTV ကဲ့သို့သော Silicon Valley မှ စတင်လုပ်ဆောင်သူများဖြစ်သည်။
Entity Resolution သည် သင်၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တန်ဖိုးကို မည်ကဲ့သို့ ပေါင်းထည့်မည်နည်း။